Meydad & Dhaawacyo Badan Oo Buux Dhaafiyay Isbitaalada Magaalada Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ugu yaraan 120 Qof oo Meyd ah ayaa la sheegayaa in ay yaallaan Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho,dhaawaca intaas waa uu ka badanyahay.
Sidoo kale Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho waxaa la geeyay dhaawaca 127 Qof oo qaarkood la garan la’yahay,maamulka Isbitaalka ayaa soo bandhigay magacyada 127 Qof ee dhaawacooda uu yaallo Isbitaalka Digfeer,waxaana ay dalbanayaan in ehellada dadkaas ay Isbitaalka tagaan.
Isbitaallada kale ee Magaalada ayaa sidoo kale soo gudbinaya dad badan oo dhaawacyo iyo meyd ah oo Isbitaallada ay ku hayaan.
Dhallinyarada Magalaada Muqdisho ayaa ku qul qulaya Isbitaallada Magaalada Muqdisho si ay dhiig ugu yaboohaan,waxaana socda gurmad xooggan oo ay sameynayaan shacabka Muqdisho.
Isbitaallada ayaa codsanaya in dhiig lagu yabooho iyada oo keydka dhiiga ee Isbitaallada uu gabaabsi yahay,waxaana socda wali gurmadka ay sameynayaan dadweynaha Magaalada.